Pyae Phyo (MMiTD): February 2012
ပုံလေးကိုမြင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တင် မသိတဲ့သူမရှိလောက်ပါဘူး။ ကျွန်တော့ဆိုဒ်လေးမှာ
Post တွေစုံအောင်လိုအပ်တာတွေကိုစဉ်းစားပြီးတင်ပေးနေတာပါဗျာ။ မသိတဲ့သူမရှိလောက်ပေမယ့်လည်း
ဒါလေးကိုလိုအပ်သူများလည်းရှိနေပါတယ်။ သူ့ရဲ့ မူရင်းဆိုဒ်မှာလည်း တစ်ခါတစ်လေဒေါင်းယူရတာအဆင်
မပြေတက်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အားလုံးအဆင်ပြေပြေဆွဲနိုင်မယ့် Mediafire မှာတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
ဒါလေးက ကျွန်တော်တို့ MMiTD ရဲ့ Admin ကိုဟူး တင်တဲ့ Post လေးပါ။ တော်တော်လေး
ကိုကောင်းလို့ကြိုက်လွန်းလို့ ပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ သေသေချာချာလေးဖတ်စေချင်ပါတယ်
Banner Designer Studio 5.1.0.0 Portable
ကိုယ်ပိုင် Website ရှိသူများအနေနဲ့ မိမိ Site ရဲ့ ဘန်နာကို လှလှပပလေးဒီဇိုင်းဆွဲချင်
တယ်ဆိုရင်တော့ Banner Designer Studio လေးကသင့်တော်ပါတယ်။ သူ့မှာလည်း အဆင်သင့်ယူသုံး
လို့ရတဲ့ ဒီဇိုင်းတွေများစွာပါဝင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်လည်း မိမိကိုယ်တိုင် Design တွေကိုဖန်တီးယူလည်းရ
ပါတယ်။ ကြေငြာပုံလေးကတော့ ရထားဂိတ်တွေကားဂိတ်တွေမှာ လျှက်ဆားရောင်းတာနဲ့တောင်သွားတူ
နေပြီဗျာ။ ဟားဟားဟား။ Design ပိုင်းဆိုတော့ ကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှင်းပြဖို့တော့ မလွယ်ကူပါဘူး။
အမျိုးအစား: Design , Software
ဒီ Post လေးကိုတော့ သဘောကျလို့ မူရင်အတိုင်းဘဲ ပြန်ပြီးမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
မူရင်းရေးသားသူကတော့ MMiTD က ကျွန်တော့်ရဲ့ အကို ၊ ဆရာ ၊ ဘော်ဒါကြီး ဂျိုကာ (ခ) ကိုဇော်ကိုဦး
ကရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်သုံးကြည့်တာတော်တော်လေးကိုလန်းပါတယ်ဗျာ။ ဒီ Post လေး
ကိုတော့ MMiTD ကမန်ဘာဝင်တော်တော်များများသုံးပြီးနေလောက်ပါပြီ။ဒါပေမယ့် MMiTD ကအခြား
သောသူများမသုံးရသေးလို့ သုံးနိုင်အောင် ပြန်လည်မျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်မှာကြည့်ကြပါဗျာ။
Total Commander v7.56a Portable
အခုတင်ပေးလိုက်တာလေးကတော့ Total Commander လေးပါ။ ဒီကောင်လေးကဘယ်
လိုနေရာမျိုးတွေမှာအသုံးဝင်လည်းဆိုရင်တော့ WinRar , WinZip , TAR , ARJ , UC2 , CAB , ACE,
LHA စတာတွေကို Support လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ် လို့ သူ့ရဲ့ မူရင်းဆိုဒ်မှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်ဗျာ။ ဒီကောင်လေး ရှိနေရင်တော့ rar တို့ zip တို့ကို ဖြည်စရာမလိုပါဘူး။ Total Commander Portable လေး
ကို ဖွင့်ပြီး တိုက်ရိုက်သုံးရုံပါဘဲ။ အဲဒါအပြင်အခြားသော Function များစွာလည်းပါဝင်ပါသေးတယ်။
အခုတလော တရားတော်များဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ ကျွန်တော် Post မတင်ဖြစ်တာတော်
တော်တော်ကြာသွားပြီဗျာ။ အဲဒါနဲ့ဘဲ အခု ဗုဒ္ဓ၀င် အကျဉ်းနှင့် ပုံတော်များ ကိုတွေ့လို့ တင်ပေးလိုက်ပါ
တယ်ဗျာ။ဒီ Post ကိုလည်း မူရင်းရေးသားသူကို ကျွန်တော်မသိရှိတဲ့အတွက် Credit မပေးနိုင်တာကို ခွင့်
လွတ်နားလည်စေချင်ပါတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်ရှာတွေ့ခဲ့တဲ့ Link လေးကိုဘဲညွန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီဆိုဒ်
Facebook အကြောင်းစုံလင်စွာသိရှိနိုင်ဖို့ Facebook နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စာအုပ်လေးတင်
ပေးလိုက်ရပါတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်လည်း ဒီစာအုပ်လေးဖတ်နေရတုန်းပါဘဲ။ တော်တော်လေးတော့စုံစုံလင်
လင်လေး ရှင်းပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အပန်းမကြီးဘူးဆိုရင်တော့လည်းဒေါင်းထားလိုက်ပါ။ တချိန်ချိန်
အမျိုးအစား: Ebook , Facebook
CCleaner v3.16.1666 Portable
CCleaner V3.16.1666 ဆိုတဲ့ ကောင်လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ လူတိုင်းလည်းပုံလေး
မြင်လိုက်တာနဲ့ကို သိကြမှာပါ။နောက်ဆုံးထွက် Version လေးဖြစ်နေတော့ အသစ်ကိုမှသုံးချင်သူတွေအ
တွက် နဲ့ မရှိသေးသောသူများ စမ်းသူချင်သူများအတွက်တင်ပေးလိုက်တာပါဗျာ။ Portable လေးဆိုတော့
အသုံးပြုရ သယ်ဆောင်ရ လွယ်ကူပါတယ်။ သူ့အကြောင်းကို မသိသေးသူများအတွက်အကျဉ်းချုံးပြီး ပြော
ပြပေးပါမယ်ဗျာ။ CCleaner လေးက ကွန်ပြူတာရဲ့ Sysetm ၊ Registry ၊ Window တို့ရဲ့ ပြသာနာတွေကို
အမျိုးအစား: Portable , Registry , Software
Aston Desktop Start Menu Full Version
ဒီတစ်ခေါက်တော့ Aston 2.0.3 ဆိုတဲ့ Desktop Menu ကို အလှဆင်တဲ့ Software
လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ အရင်တစ်ခေါက်တုန်းကတော့ Aston ခေါင်းစဉ်နဲ့ဘဲ တင်ပေးဖူးပါတယ်။
အခုတစ်ခါကျတော့ Theme လေးတွေပါ အမျိုးပေါင်း 50ကျော်60လောက်ရထားတာနဲ့ဘဲ နောက်တစ်
ခေါက် ပြန်တင်ပေးလိုက်တာပါ။ Theme လေးတွေကတော့ အဲဒီ မှာ ၀င်ကြည့်တာတော်တော်ကိုလန်း
တယ်ဗျို့။Full Version လေးဘဲတင်ပေးထားတယ်နော်။
IDM ရဲ့ Download Speed ကို IDM Optimizer နဲ့ ထပ်ပြီးမြှင့်တင်မယ်
ခေါင်းစဉ်လေးကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တင် လူတိုင်းစိတ်ဝင်စားကြမှာပါ။ အဓိကစိတ်ဝင်စားသွား
ကြမယ့်သူတွေကတော့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘဲဖြစ်ပါတယ်။ တချို့သော နယ်မြေခြားက
သူငယ်ချင်းတွေလည်း နှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ် ဘာဘဲပြောပြောပါဗျာ။ အသုံး တည့်မှာတော့ သေချာ
ပါတယ်။ File Size ကလည်း 299kb ဘဲရှိတာဆိုတော့ အပျင်းပြေ ဒေါင်းယူပြီး သိမ်းထားလည်း မမှားပါဘူး။
သူရဲ့ အသုံးဝင်ပုံလေးကတော့ IDM နဲ့ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲတဲ့ Speed ကို ဒါလေးက ထပ်ပေါင်းပြီးမြှင့်တင်ပေး
မှာဖြစ်ပါတယ်။ နေရာဒေသနဲ့ အသုံးပြုတဲ့ အင်တာနက် လိုင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ ကွဲပြားသွားမှာပါ။
အမျိုးအစား: Downloader , Internet Tools , Software
မိမိရဲ့ ကွန်ပြူတာကို Hacker တွေရဲ့ရန်မှ လုံခြုံစိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ဖို့ အကောင်းဆုံး
Spyware တွေထဲမှာတော့ Spyware.Cease.2011 v7.1.2.1 လေးကလည်း တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်ပါတယ်။
ရှေ့မှာလည်း ကျွန်တော် Keylogger Detector ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့တင်ပေးဖူးပါတယ်။ ဒါလေးက ပိုကောင်း
လို့ကျွန်တော်ထပ်တင်ပေးလိုက်တာပါ Internet အသုံးပြုသူတွေအတွက်တော့ 100% ဆောင်ထားသင့်
တဲ့ Software လေးတစ်ခုပါဗျာ။အမြဲတမ်းသုံးနိုင်အောင် ကျွန်တော် Full Version လေးပေးထားပါတယ် ဗျာ။အထဲမှာ Keygen လေးပါထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ Installation ပြုလုပ်ပုံနဲ့ Serial key ထည့်သွင်း
ပုံ အဆင့်အဆင့်ကိုလည်း ပုံလေးနဲ့တကွရှင်းပြပေးထားပါတယ်ဗျာ။
အမျိုးအစား: Hacking , Internet Tools , Security
နောက်ဆုံးထွက် USB Disk Security 6.1.0.432 with Keygen
နောက်ဆုံးထွက် USB Disk Security လေးတွေ့လို့တင်ပေးလိုက်တာပါ။ ရှေ့မှလည်း ဒါမျိုးလေးတွေတင်ပေးဖူးပါတယ်။ အခု က Latest Version လေးတွေကိုမှသုံး ချင်သူများအတွက်ရည်ရွယ်ပြီး
တင်ပေးလိုက်တာပါ။ရှိပြီးသားသူငယ်ချင်းများအတွက်Sorryပါဗျာ။ မရှိသေးသူများ သုံးနိုင်အောင် တင်ပေး
လိုက်တာပါ။လူတိုင်းအသုံးပြုသင့်တဲ့ Software တစ်မျိုးပါဘဲ။ ကွန်ပြူတာတော်တော်များများမှာလည်း ဒါမျိုး
အမျိုးအစား: Antivirus , Software , USB Software
မိမိကွန်ပြူတာရဲ့ Desktop ကို Mustang Theme Pack နဲ့အလှဆင်ရအောင်
မိမိရဲ့ ကွန်ပြူတာ Desktop ကို အလှဆင်ချင်သူတွေအတွက် ကတော့ အခုတင်ထားတဲ့
ပုံလေးကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့တင်ဘဲ တော်တော်လေး သဘောကျသွားမှာပါ။ အလန်းလေးဘဲဗျ တော်တော်
ကိုလန်းတာနော်။ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် Theme လေးတွေလည်း အများကြီးပါဝင်ပါတယ်။ တမျိုး ရိုးသွားရင်
တော့ နောက်တစ်မျိုးပြောင်း ပြောင်းသုံးကြပေါ့ဗျာ။ အမြဲတမ်းသုံးနိုင်အောင် Full Version လေးတင်ပေး
လိုက်ပါတယ်ဗျာ။တစ်ခုတော့ မေးလာစရာရှိပါတယ်။ ဒါလေးတင်ထားလို့ စက်ကိုလေးလံခြင်းရှိလားဆိုပြီး
မေးနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ချပါ လုံးဝမလေးစေပါဘူး။
ဒါလေးက တော့ Audio ပိုင်းဆိုင်ရာ Converter တစ်မျိုးပါ။ Converter တွေတင်းထား
တဲ့နေရာမှာ Video တွေများပြီး Audio နည်းနေသေးလို့ အခု ထပ်ပြီးတင်ပေးလိုက်တာပါဗျာ။ ဒီကောင်
လေးရဲ့ နာမည်ကတော့Freemake Audio Converter ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ သူ Convert လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Audio Format တွေကတော့ MP3, WMA, WAV, FLAC, AAC, M4A, OGG, အပြင် အခြားသော audio File တွေကိုလည်း Convert လုပ်ပေးနိုင်ပါသေးတယ်။ နောက်ပြီး Audio ကနေပြီး Player တွေနဲ့
ချိတ်ဆက်ပြီး Convert လုပ်ပေးနိုင်ပါသေးတယ်။ convert audio to MP3 player, iPod, iPhone, iPad, PSP, extract audio from video, join audio files.
အမျိုးအစား: Converter , Portable , Software
Freemake Video Downloader v3.0.0.22 Portable
အခုတင်ပေးလိုက်တာလေးကတော့ Video Downloader လေးပါ။ ကျွန်တော် တစ်ခါမှမတင်ပေးဖူးသေးလို့ အခုတင်ပေးလိုက်တာပါ။ သူ ဒေါင်းပေးနိုင်တာလေးတွေကတော့ YouTube,
Facebook , Megavideo , MTV , Vimeo , Tubeplus တို့ကနေပြီး Download ဆွဲပေးနိုင်ပါတယ်။
YouTube မှ audio file များကိုလည်း ရယူနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Online မှနေပြီး Video Format များကို
လည်း Convert လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုအမျိုးအစားတွေကို Convert လုပ်ပေးနိုင်သလဲဆိုရင်တော့
AVI, MKV, MP3, iPhone, iPod, PSP, Android စတာတွေကို Freemake Video Downloader နဲ့
အမျိုးအစား: Downloader , Internet Tools , Portable
Geekz Virus Remover v4.2
ကျွန်တော် Antivirus နဲ့ပတ်သတ်တာကိုမတင်တာတွေကြာလို့ အခုတစ်ခုတပ်တင်ပေးလိုက်
ပါတယ်။File Size ကလည်းသေးသေးကွေးကွေးလေးနဲ့တော်တော်လေးအသုံးဝင်တယ်ဗျ။ သူ့လုပ်လုပ်
ဆောင်ချက်လေးတွေကို ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြချင်ပါတယ်။Task Bar ,Drive , Run , Folder Option
Hidden File , Task Manager , File Extension , Restart & Shut Down Menu , Registry Editor ,စ
တဲ့ Virus ကြောင့် ပျောက်နေတာတွေကိုပြန်ပြီးဖော်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအပြင်အခြားတော့ Feature များ
CPU Speed Professional v3.0.4.3 Portable
CPU Speed ကိုမြှင့်တင်ပေးတဲ့ Software လေးဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ပြူတာကို မြန်မြန်ဆန်
အသုံးပြုလိုသူများအတွက် အထူးသင့်လျှော်တဲ့ Software လေးပါ။ ကျွန်တော် Portable လေးတွေ့လို့ပြန်
ပြီးတင်ပေးလိုက်တာပါ။ အသုံးပြုရတာလည်းလွယ်ကူလို့ ကျွန်တော်မရှင်းပြတော့ပါဘူး။ ရှေ့မှာလည်း ကျွန်
တော် အလားတူ Software တွေတင်ပေးဖူးပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်စမ်းသုံး ကြည့်မှဘဲ ကောင်းကြောင်းကိုသိ
iCash v7.4.4 Portable
အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ Software ကတော့ Site တော်တော်များများမှာမတွေ့ရပါဘူး။
လူကြိုက်လည်းနည်းပါလိမ့်မယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Account ပိုင်းနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ စာရင်းဇယားတွေ၊
ငွေစာရင်းတွေ ၊ အကြွေးစာရင်းတွေ ၊ ဘဏ်စာရင်းတွေ ၊ စရိတ်တွေ စတဲ့ စာရင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကို Control လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Software လေးဘဲဖြစ်ပါတယ်။ လူတိုင်းသုံးဖို့တော့အဆင်မပြေလောက်ပါဘူး။
စာရင်းပိုင်းအတွေ့အကြုံရှိသူများသာ စမ်းသုံးကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေ။ ဒီကောင်လေးက File Size သေး
တယ်ဆိုပြီးလျှော့တွက်လို့မရပါဘူး။ ကျွန်တော်စမ်းပြီးလေ့လာကြည့်တာ သဘောကျလို့ ပြန်ပြီးတင်ပေး
လိုက်တာပါ။ အဲ...... အပေါ်မှာတော့ လူတိုင်းသုံးဖို့အဆင်မပြေဘူးပြောပြီးကျွန်တော် ကျတော့ စမ်းသုံး
ကြည့်လို့ရတယ်ပြောတယ်လို့ ထင်စရာတွေရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်က လည်း Accountant တစ်ယောက်
Mozilla FireFox v10.0.2 Portable
ဒါလေးကလည်း ထွေထွေထူးထူးတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ အင်တာနက်အသုံးပြုသူတိုင်းသိကြ
တဲ့ Mozilla FireFox ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ Internet Tools တွေလည်း တစ်ခုမှမတင်ပေးရသေးလို့ တင်ပေး
လိုက်တာပါဗျာ။ ပြီးတော့ နောက်ဆုံးထွက် Version လေးလည်းတွေ့ထားလို့ပါး အားလုံးအဆင်ပြေအောင်
ကျွန်တော် Portable လေးပဲတင်ပေးထားပါတယ်။
အမျိုးအစား: Internet Tools , Portable , Software
Corel VideoStudio Pro X4 v14.1.0.150
အခုတင်ပေးထားတာလေးကတော့ Video Editing Software လေးတစ်မျိုးပါဘဲ။ အရင်ကလည်း
အဲဒါမျိုးတေင်ပေးဖူးပါတယ် အခုဟာက Version အသစ်ထွက်လာလို့တင်ပေးလိုက်တာပါ။ ဒီကောင်လေး
က Video Editing ကို Professional အသုံးပြုနေသူများအတွက် အထူးအပါယ်ရှယ်လေးပါ။ အခုမှ Editing ကိုစပြီးလေ့လာချင်သူများအတွက်တော့ အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။ နည်းနည်းလေးခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။ သူ့မှာ Effectတွေမျိုးစုံအောင်ပါဝင်ပါတယ်။ ဓါတ်ပုံများ ဗီဒီယိုများ ကို နောက်ခံသီချင်းများထည့် ပြီး Effect တွေနဲ့
Editing လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အခြားသော Function များစွာပါဝင်ပါတယ်။
Xilisoft Video Splitter v2.1.1.0829 Portable
Xilisoft ကထုတ်ထားတဲ့ Video Splitter လေးပါ။ အရှေ့မှာတွေလည်း ကျွန်တော် အခြား
Splitter လေးတွေတင်ပေးဖူးပါတယ်။ အခုဟာလေးက ကျွန်တော် သုံးကြည့်ပြီး တော်တော်လေးသဘော
ကျလို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ။ Xillisoft ကနာမည်ကြီးပြီးသားဘဲဗျာ။ သူဆီက Software တွေဆိုရင်တော့
ဘယ်လိုကောင်းမှန်း ရှင်းပြပေးစရာမလိုတော့ပါဘူး။ သူ Support လုပ်ပေးတဲ့ File အမျိုးအစားတွေက
တော့AVI, MPEG, MP4, DivX, MOV, and WMV အပြင်အခြား Video Format တော်တော်များများကို
Support လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Portable လေးဖြစ်တဲ့အတွက် အားလုံးဘဲအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။
လူတိုင်းသိပြီးသား Internet Download Manager လေးပါ။အရှေ့မှာလည်း ကျွန်တော်တင်ပေးထားဖူးပါတယ်။ အခုဟာက နောက်ဆုံးထွက် Version ထွက် လာလို့ ပြီးတော့လည်း Portable လေးလည်းဖြစ်လို့ အားလုံးဘဲလိုချင်လိမ့်မယ်လို့ထင်မိပါတယ်။ အဆင်ပြေပြေဒေါင်းနိုင်အောင်
လည်း Link သုံးမျိုးနဲ့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ အခုတလောတော့ ကျွန်တော် Portable လေးတွေတင်ပေး
သွားပါ့မယ်။ သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးလည်း Portable လေးဆိုတော့ သုံးရတာလည်း အဆင်ပြေစေချင်
Auslogics BoostSpeed v5.2.1.0 Portable
ဒါလေးကတော့ ပုံလေးမြင်လိုက်တာနဲ့တင်ဘဲ ဘာSoftware လေးလည်းဆိုတာကိုသိ
ကြမှာပါဗျာ။ မသိသေးသူများအတွက်လည်းကျွန်တော်ရှင်းပြပေးလိုက်ပါတယ်။ Portable လေးရလာလို့
ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတင်ပေးလိုက်တာပါ။ ဒီကောင်လေးကတော့ မိမိရဲ့ Computer ကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်သုံးချင်
သူများအတွက်အဆင်ပြေစေပါတယ်။ Computer ရဲ့ Speed ကို မြှင့်တင်ပေးတဲ့ Software လေးဘဲဖြစ်ပါ
တယ်။ အဲဒီအပြင် Comupter ရဲ့ System ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုလည်း Repair လုပ်ပေးပါတယ်။ အခြားသော
K-Lite Mega Codec v8.4.0 Media Player Classic
ဒါလေးကတော့ Player လေးတစ်ခုပါဘဲ Latest Version လေးတွေ့လို့ တင်ပေးလိုက်တာ
ပါ။ပြီးတော့ Portable လေးဆိုတော့ ပိုပြီးအဆင်ပြေတာပေါ့။ အရင်ကလည်း ကျွန်တော် တစ်ခုတင်ပေးဖူး
ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ Version အဟောင်းပါ။ ပြီးတော့ Portable လေးလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်
လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Player တစ်ခုပါ။ ဘယ်လို Video File မျိုးကိုမဆို Support လုပ်ပါတယ်။ ဒါလေးကို Install လုပ်ထားရုံနဲ့ 3gp,FLV,WMA, အစရှိတဲ့ Window Media Player က မဖွင့်နိုင်တဲ့ Video File
တွေကို Window Media Player နဲ့ ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။
Vocal Remover Portable & YoGen Vocal Remover 2010v3.3.9
အောင်မျိုး: အစ်ကို vocal remover ဆော.ဝဲလေးရှိရင် မျှဝေ ပေးပါဦး။ magic vocal remover ကိုဒေါင်းထားမိတာ serial key ပဲထည်.ခိုင်းနေလို. ဗျ။ လေးစားပါတယ်အစ်ကို ။
Cbox မှာ ကိုအောင်မျိုးတောင်းထားတာလေးတွေ့လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ကျန်တဲ့ အသုံး တည့်မယ့်သူငယ်ချင်းများအတွက်လည်း ရည်ရွယ်ပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဒါလေးက Audio ပိုင်းဆိုင်ရာကို မိမိလိုချင်သလို Edit လုပ်နိုင်တဲ့ Software လေးပါဘဲ။ အားလုံးဘဲ အဆင်ပြေအောင် Portable တစ်မျိုးနဲ့ နောက်ထပ် Version တစ်မျိုးကို Link နှစ်မျိုးနဲ့ခွဲတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
Solveig MM Video Splitter v3.0.1201.23 Portable
အခုတင်ပေးလိုက်တာလေးကတော့ Video File တွေကိုပြန်ပြီး အပိုင်းလေးတွေခွဲတဲ့
Software လေးဘဲဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုနေရာတွေမှာအများဆုံးသုံးတက်ကြသလဲဆိုရင်တော့ Video တွေ
က ဖိုင်ဆိုဒ်ကြီးတက်ကြပါတယ် အဲဒါတွေကို ကိုယ်လိုချင်သလောက်အပိုင်းလေးတွေ2ပိုင်း ဒါမှမဟုတ်3ပိုင်း ပိုင်းကြပြီးတော့ Upload တင်ကြပါတယ်။ အပိုင်းကတော့ File Size ကိုမူတည်ပြီးတော့ ပေါ့ဗျာ။
ဒါက ကျွန်တော်တော်လက်လှမ်းမှီသလောက်ပြောပြတာပါ။ တခြား အသုံးတည့်မယ့် အကြောင်းတွေအများ
ကြီးရှိပါသေးတယ်။ ဥာဏ်ရှိသလိုသုံးနိုင်ပါတယ်။ Portable လေးဆိုတော့ အဆင်ပြေတာပေါ့ဗျာ။
USB နဲ့ External Hard Disk ကို Partition နှစ်ပိုင်းခွဲ တစ်ပိုင်းကို ဖျောက်ပြီးလျှို့ဝှက်ချက်တွေဖွက်ထားမယ်
ဒါလေးက MMiTD မှာ ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ Post လေးပါဘဲ။
ခေါင်းစဉ်လေးကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဘဲအားလုံးစိတ်ဝင်စားသွားကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီ Post
လေးကိုတင်ချင်နေတာတော့ ကြာပြီဗျာ။ ဒီ Software လေးကို ရှာတွေ့ကတည်းက စမ်းသုံးကြည့်တာ
တော်တော်လေးကိုသဘောကျတယ်ဗျ။ ကျွန်တော်သဘောကျသလို MMiTD ကသူငယ် ချင်းတွေလည်း
သဘောကျမယ် အသုံးတည့်မယ်ထင်လို့ ဒီလိုပြန်ပြီးမျှဝေတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Serial Key လိုက်ရှာနေတာ
နဲ့ဘဲ အခုမှတင်ဖြစ် သွားတာပါ။Serial Key ကလည်း တော်တော်လေးခက်ခက်ခဲခဲရှာလိုက်ရတယ်ဗျာ။
Craagle လေးနဲ့ Crack, Serial, Keygen တွေကို ရှာရအောင်
တချို့ Software တွေကို လိုချင်လို့ Internet မှာရှာကြရတယ်ဗျာ။ ရှာလို့လည်းတွေ့ရော Trial Version
ဖြစ်နေတယ်ဗျာ။ Serial တွေ Crack တွေပါမလာတက်ကြပါဘူး။ အဲဒီအချိန်မှာတော့ ဒီ Software လေးက
Serial တွေ Crack တွေကို ကောင်းကောင်းကြီးရှာပေးနိုင်ပါတယ်။ အမြဲတမ်းသုံးနိုင်အောင်လည်း Full Version တင်ပေးထားပါတယ်ဗျာ။အားလုံးသုံးနိုင်အောင် အသုံးပြုပုံလေးကို ပုံနှင့်တကွ ရှင်းပြပေးထားပါ
တယ်ဗျာ။ တစ်ခုတော့ ကျွန်တော်ကြိုပြီးမှာထားပါရစေနော်။ ဒီ Software လေးကိုအသုံးပြုနေချိန်မှာတော့
Easy Screen Capture 2.0.4 Portable
ဒါလေးကတော့ Screen Capture လေးပါ။ အသုံးတည့်မယ့်သူများအတွက်တင်ပေးလိုက်
တာပါ။Desktop ပေါ်က ပုံရိပ်တွေကို ရုပ်ထွက်ကောင်းကောင်းနဲ့ Screen Shot လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Portable ဆိုတော့ အသုံးပြုရ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့အဆင်ပြေပါတယ်။ သွားလေရာ USB နဲ့ယူသွားလို့ လည်း
အဆင်ပြေပါတယ်ဗျာ။အသုံးတည့်မယ်ဆိုရင်တော့အောက်က Link မှာဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
အင်တာနက် Speed ကို 200% လောက်မြန်စေတဲ့ NetScream 1.1.31
ဒီ Software လေးကို တွေ့တွေ့ချင်းမယုံးဘူးဗျ မယုံးလို့စမ်းကြည့်လိုက်တော့ တကယ်
ဗျို့။ သူ့ရဲ့ မူရင်းမှာတော့ Internet Speed ကို 200% လောက်ပိုပြီး မြန်စေတယ်လို့ ဆိုထားတာဘဲဗျ။ တကယ်ကို မြန်လာပါတယ် ဒါပေမယ့် နေရာဒေသကိုလိုက်ပြီး Speed ကကွာမယ်နဲ့တူတယ်။ အနည်း
အများဘဲကွာမှာပါ ပုံမှန်သုံးနေတဲ့ Speed ထက်တော့ ပိုပြီး မြန်လာတာတော့အမှန်ဘဲဗျ။ ကျွန်တော်တို့
နိုင်ငံသားတွေအတွက် အထူးထုတ်ထားသလားလို့တောင်ထင်မိတယ်ဗျာ။ File Size ကလည်း 1.66MB ဘဲ
CyberLink PowerDirector - 9
Video Editing Software လေးတစ်ခုပါဘဲ ကျွန်တော် အရမ်းသဘောကျတဲ့ Editing ထဲ
မှာဆိုရင် ဒုတိယမြောက်အကြိုက်ဆုံး Software လေးထဲမှာပါဝင်ပါတယ်။ တကယ့်ကို Professional သုံးလို့ရတဲ့ Editing Software လေးပါဘဲ။ Effect တွေကလည်း အမြောက်အများပါဝင်ပါတယ်။ အသုံးပြု
ပုံလေးကို လည်းကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်ပါမယ်။ အဲဒါမှဘဲ စမ်းသူကြည့်ချင်သူများအတွက်ပါအဆင်ပြေစေ
ချင်လို့ပါ။ အမြဲတမ်းသုံးနိုင်အောင်လည်း Serial လေးနဲ့ Patch File လေးပါတခါတည်း ထည့်ပေးလိုက်
Tekken5(Fighting Game)
အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ Game လေးကတော့ ကျွန်တော် တော်တော်လေးကို သဘောကျတဲ့
Fighting Game လေးဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် လေးတန်း ငါးတန်းလောက်တုန်းက P1 Game နှိပ်တက်
ခါစတုန်းက ထမင်းမေ့ဟင်းမေ့နဲ့ နှိပ်ခဲ့တာဗျ။ အရမ်းဆော့လို့ကောင်းပါတယ်ဗျာ။ အဲဒီအချိန်တုန်းက
တော့ Takken -3ဗျ အခုတော့ Takken5ထွက်လာပြီဗျာ။ ထွက်တာတော့ ကြာပြီထင်ပါတယ်။ အခုမှ
တွေ့လို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ။ ကစားကြည့်ပါဗျာ။အကြိုက်တေ့ရစေမယ်လို့အာမခံပါတယ်ဗျာ။
မိမိကွန်ပြူတာက Drive တွေကို Icon ပြောင်းပြီး အလှဆင်မယ်
အခုတင်ပေးလိုက်တာလေးကတော့ ကွန်ပြူတာကို အလှဆင်လိုသူများ အမြင်ဆန်းစေ
ချင်သူများအတွက် တင်ပေးလိုက်တာပါ။ ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ ဒီကောင်လေးက ကွန်ပြူတာမှာရှိတဲ့ Drive
တွေကို မြင်နေကြပုံစံမျိုးနဲ့ မဟုတ်ဘဲ အမြင်ဆန်းစေဖို့အတွက် မိမိတို့ လိုချင်တဲ့ Icon လေးတွေအဖြစ်
ပြောင်းလည်းပေးတဲ့ Software လေးဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း Drive C,D,E,F တွေကို နမူနာ
ပြောင်းပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတို့မှာလည်း ပြောင်းချင်တဲ့ Icon လှလှလေးတွေရှိရင် ကိုယ်
တိုင်ပြောင်းလို့ရပါတယ်။ သူ့ရဲ့အသုံးပြုပုံလေးကလည်းလွယ်ကူပါတယ်။ အနည်းငယ်ရှင်းပြပေးလိုက်ပါ
Window တင်ပြီး အသံမကြားရသူများ ၊ Sound Driver အဆင်မပြေသူများအတွက်တင်ပေး
လိုက်ပါတယ်ဗျာ။ Window7အတွက် သီးသန့်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ window တင်ပြီးအသံတွေမရတော့ဘူးဆို
ရင် ၊ Audio လေးတွေ မှိန်နေတယ် အလုပ်မလုပ်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ ဒီ Driver လေးကိုသာ Run ပေး
လိုက်ပါဗျာအဆင်ပြေသွား ပါ လိမ့်မယ်။
အမျိုးအစား: Driver , Software
Zombie Shooter (သရဲဂိမ်း)
ကျွန်တော် Game မတင်တာကြာနေပြီဗျ။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်ကလည်း Game ကို သိပ်ပြီး ကစားလေ့လည်းမရှိဘူးလေ။ တစ်ခါတစ်လေတော့ စိတ်ရူးပေါက်ရင် Game နှိပ်တက်ပါတယ်။ အခုလည်း
စိတ်ရူးပေါက်လာလို့ Game လေးတစ်ခုလောက် ဒေါင်းပြီး နှိပ်လိုက်တာ တော်တော်လေးကို သဘောကျလို့
သူငယ်ချင်းများအားလုံးကစားနိုင်အောင် ကျွန်တော် ညွန်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဘာမှ Serial တွေ Crack
တွေမလိုဘူးတစ်ခါတည်း Install လုပ်ပြီး ကစားရုံဘဲဗျ။ ကျွန်တော်ဟိုးးးး အရင်က တင်ပေးထားဘူးတဲ့ Aline Shooter2 နဲ့ နည်းနည်းလေးတူတယ်ဗျ။
Audio File တွေကို Convert လုပ်ပေးနိုင်တဲ့Converter တစ်မျိုးပါဘဲ။ သူ့အရှေ့မှာ
လည်း Converter တွေမျိုးစုံအောင်တင်ပေးပြီးသွားပါပြီ။ ဒါပေမယ့် Audio တွေကို သီးသန့် Convert လုပ်
တဲ့ Software မတင်ပေးရသေးလို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ။ Converter ဆိုတော့ အသုံးပြုပုံတွေကလည်း
ထွေထွေထူးထူးတော့ ရှင်းပြစရာမလိုတော့ပါဘူး။ အမြဲတမ်းသုံးနိုင်အောင်လည်း ကျွန်တော် Full Version
Ulead Video Studio X 2
Ulead Video Stodio X2 တဲ့ဗျာ ကျွန်တော့်အကြိုက်ဆုံး လက်ရှိလည်း သုံးနေတဲ့ Video
Editing Software လေးတစ်ခုပါဘဲ။ Function တွေလည်း မျိုးစုံအောင်ပါဝင်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ Resolution
ကလည်း တော်တော်လေးကို ရုပ်ထွက်ကောင်းပါတယ်ဗျာ။ Editing ကို Professional လုပ်နေတဲ့သူတွေ
အတွက်တော့ ဆောင်ထားသင့်တဲ့ Software တစ်မျိုးပါဘဲဗျာ။ အမြဲတမ်းသုံးနိုင်အောင်လည်း Key Gen
ပါထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ တစ်ခုတော့ ကြိုပြီးသတိပေးထားရဦးမယ်ဗျာ။
AVS Video Editor V 6.0
Video Editing ကို ကလိချင်သူများနဲ့ လက်ရှိကျွမ်းကျင်ပြီး အသုံးပြုနေသူများအတွက်ရည်
ရွယ်ပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ AVS Video Editor လေးကတော့Video Editing ကို Professional တက်
ကျွမ်းထားသူများအတွက် တော်တော်လေးအသုံးဝင်ပါတယ်။ ဒီကောင်လေးမှာတော့ Function ကအတော်
များများကိုပါဝင်ပါတယ်။ Video Effects , Text Effect , Voice , Transitions , စတဲ့ Effect တွေပါဝင်
တယ်လို့သိရပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း စမ်းပြီး မသုံးကြည့်ရသေးပါဘူး။
ဒါလေးကတော့ မြင်လိုက်တာနဲ့တင် အားလုံးသိကြမှာပါ။ လူတိုင်းလည်း သုံးနိုင်ကြတဲ့
Microsoft Office 2007 ပါ။ အသုံး လိုမယ့်သူများအတွက် ရည်ရွယ်ပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ တစ်ခု
ချင်းအလိုက် အသုံးပြုပုံတွေကိုလည်း ကျွန်တော့် Site ရဲ့ Ebook များ ဒေါင်းယူရန်ဆိုတဲ့ နေရာမှာ လိုအပ်
တဲ့ Application အလိုက် ဒေါင်းယူပြီး လေ့လာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Serial No လည်း တစ်ခါတည်းထည့်
ပေးလိုက်ပါတယ်။ ပိုပြီးအဆင်ပြေအောင်လည်း အောက်မှာ Serial No တွေကို ထပ်ပြီးရေးပေးလိုက် ပါ
BitDefender Internet Security 2012 (32 & 64)bit with Patch
အခု တင်ပေးမှာကတော့ အားလုံးလည်း သိပြီးသား ဖြစ်မယ့် BitDefender Internet Security 2012 လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာအသုံးများလာတာဖြစ်ပါတယ်။ Kaspersk
ကိုတောင် လိုက်ပြီး ယှဉ်ဖိုက်နိုင်တယ်ဗျာ။ အဲဒီလောက်ဆိုရင်တော့ သူ့ရဲ့ အရည်အချင်းလေးကိုတော့
သိလောက်ပြီထင်ပါတယ်ဗျာ။ သူ့အတွက်ကို 32bit နဲ့ 64bit ဆိုပြီး နှစ်မျိုးတင်ပေးထားပါတယ်ဗျာ။နောက်
ပြီးတော့ BitDefender Version အားလုံးအတွက် Patch File ကိုပါထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်ဗျာ။
Security Cam Hacking v.2012
Hacking ၀ါသနာပါသူများအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ အမှန်အကန် ကလိကြပါနော်။
အသစ်ထွက်တာလေးတွေ့လို့ ကျွန်တော် တင်ပေးလိုက်တာပါ။ ကျွန်တော်လည်း ကလိရမှာဘဲဗျ။ အ ခုလောလောဆယ်တော့ ဒေါင်းနေတုန်းဘဲရှိသေးတယ်ဗျာ။ အမြဲတမ်းအသုံးပြုနိုင်အောင် Full Version
လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အသုံးတည့်မယ်ဆိုရင်တော့ အောက်က Link မှာဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
IDM ရဲ့ Download Speed ကို IDM Optimizer နဲ့ ထပ်ြ...
နောက်ဆုံးထွက် USB Disk Security 6.1.0.432 with Key...
မိမိကွန်ပြူတာရဲ့ Desktop ကို Mustang Theme Pack နဲ...
Vocal Remover Portable & YoGen Vocal Remover 2010v...
USB နဲ့ External Hard Disk ကို Partition နှစ်ပိုင်...
Craagle လေးနဲ့ Crack, Serial, Keygen တွေကို ရှာရအေ...
အင်တာနက် Speed ကို 200% လောက်မြန်စေတဲ့ NetScream 1...
မိမိကွန်ပြူတာက Drive တွေကို Icon ပြောင်းပြီး အလှဆင...
BitDefender Internet Security 2012 (32 & 64)bit w...